Inhlanzeko (Ubhavu) Ishidi le-Acrylic, China Inhlanzeko (Ubhavu) Abakhiqizi Beshidi le-Acrylic, Abahlinzeki, Ifektri - Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd.
Ikhaya>Product>Inhlanzeko (Ubhavu) Ishidi le-Acrylic
I-sanitary acrylic iyinto ekhethekile yokwenziwa, eyenzelwe ukwenza ubhavu. Ngenxa yokumelana kwabo namakhemikhali nokuhlanzwa, amashidi e-acrylic sanitary ayindlela ekhethwa ngayo kubhavu, amathreyi eshawa. Ubuso be-Acrylic buyi-specular futhi buhlala buqinile. Inikeza impilo ende, ukunakekelwa okulula kanye nezidingo zenhlanzeko yamabhavu okugeza.
Olunye uhlangothi luvikelwe yiFM Film ecacile enefemoformable, evumela ukuphathwa okuphephile phakathi nomjikelezo ophelele wokukhiqiza, ngaphakathi kwamazinga okushisa asebenza embonini.
Ububanzi bethu obukhulu nosayizi wokukhethwa kwethu kuzonikeza amakhasimende ukukhetha okuningi.
Igama Product Impahla yenhlanzeko Ishidi le-Acrylic / ishidi le-Acrylic lamabhavu / indawo yokugezela / isinki / amathileyi okugeza
Uhlobo Abalingisi (Abalingisi Bamaseli)
Ubukhulu (mm) 2mm - 5mm
Amandla okukhiqiza 2000 amathani / ngenyanga.
Colors emhlophe, ephuzi, nsundu, Ivory, ect..38 imibala ejwayelekile, inkambiso iyatholakala
emasakeni Ifilimu elilodwa le-PE elimelana nokushisa
Usayizi I-1900 X 960mm, 1780 X 960mm, 1250 X 2050mm, njll ngosayizi abangama-50
Izitifiketi I-CE, i-ISO 9001, i-RoHS
MOQ Ama-500 kgs.
A: MOQ kuyinto 30pieces / oda. Usayizi ngamunye, ubukhulu.
A: Sinemibala ejwayelekile engama-60, Singakwazi ukwenza ngokwezifiso umbala okhethekile ngokuya ngemfuneko yakho.
Q: Siyini isikhathi sakho sokuhola ekukhiqizweni ngobuningi?
A: Ngokuvamile izinsuku eziyi-10-30, kuya ngosayizi, ubuningi nesikhathi.
A: Ishidi ngalinye elimbozwe yifilimu le-PE noma iphepha lezandla, cishe amathani ayi-1.5 apakishwe ku-pallet yokhuni.